Ny fampianarana momba ny tontolo iainana sy ny toetrandro - mandray andraikitra i Karaiba
Home » Travel Associations News » Ny fampianarana momba ny tontolo iainana sy ny toetrandro - mandray andraikitra i Karaiba
Rehefa miato ny fankalazana ny Andron'ny Tany anio izao tontolo izao, ny Fikambananan'ny fizahan-tany any Karaiba (CTO) dia faly manambara ny fanohanany ireo hetsika izay nitondra fiovana lehibe.
Tsy takona afenina fa ny tena fototry ny fizahan-tany any Karaiba dia ny tontolo voajanahary tsy manam-paharoa misy antsika; iray izay manankarena harena voajanahary, saika tsy voaloto, mirehareha amin'ireo faritra manintona ireo mpitsidika manerana an'izao tontolo izao, ary mivelona amin'ny fiainana sy fivelomana. Ao Karaiba dia manana adidy masina isika hiaro ireo fananana ireo amin'ny fiziriziriana amin'ny fampandrosoana sy ny fampiharana ny fomba fizahan-tany maharitra, raha mizara ny harena voajanahary amin'ireo mpizahatany mankany amorontsika.
Amin'ny maha masoivohom-pandrosoana fizahan-tany any Karaiba izay tanjon'izy ireo dia: fizahan-tany maharitra maharitra - Ranomasina iray, feo iray, karaiba iray, ny CTO dia mifanaraka tanteraka amin'ny filana hanaja ny tany misy antsika. Mino izahay fa hisy foana ny fifanolanana eo amin'ny fanajana ny planeta sy ny faniriana hahazo tombony amin'ny fananana voajanahary sarobidy izay ananantsika. Ankoatr'izay, tsy maintsy ekentsika fa ny famotehana ny planetantsika amin'ny fikatsahana fitomboana ara-toekarena dia loza mitatao ho an'ny taranaka ankehitriny sy ny ho avy.
Noho io antony io indrindra no ilofosan'ny CTO hametraka an'i Karaiba ho faritra fizahan-tany maharitra - faritra mitarika ny valiny manerantany amin'ny fiovan'ny toetrandro amin'ny alàlan'ny fanarahana ny tsy fitongilanan'ny karbaona, iray izay mitantana am-pahavitrihana ny tany, ny rano ary ny angovo ao aminy ary manapa-kevitra. mampiasa teknolojia izay mitarika fahombiazan'ny loharanon-karena manerana ny faritry ny fizahan-tany fizahan-tany. CTO koa dia hanohy hanome ny manam-pahefana manana fitaovana sy angona ilaina hamelomana ny politikam-pizahan-tany sy ny lalàna mifehy izay mahasoa indrindra ny faritra, ary miaro ny fitondran-tena mendrika avy amin'ireo firenena lehibe manerantany.
Faly izahay fa mifantoka amin'ny Andron'ny Tany 2017 Fahaizana mamaky teny tontolo iainana sy ny toetrandro, satria efa namolavola ny Buletin-toetr'andro fizahan-tany any Karaiba fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miasa amintsika ao amin'ny Institute for Metrology and Hydrology (CIMH) any Karaiba. Raha vantany vao vita ity bileta ity dia ho fitaovana fitarihana ho an'ireo mpanao politika sy fizahan-tany fizahan-tany hahafantatra tsara kokoa ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny fiveloman'izy ireo, sy ny fomba ahafahan'izy ireo mampifanaraka ny fahombiazana eo am-pandraisana anjara amin'ny raharaham-pirenena tsaratsara kokoa.
Rehefa mitady hiaro ny planetantsika ianao, iray amin'ireo fanamby lehibe indrindra ny manasa ny olom-pirenena rehetra hiditra amin'ilay ezaka. Ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba, amin'ny alàlan'ireo matihanina voaofana ary miaraka amin'ireo mpiara-miasa manerantany sy isam-paritra, dia faly manome torolàlana sy fampahalalana momba ny fomba mety hahatonga ny fihetsiky ny tsirairay ho ampahany mahomby amin'ny vahaolana. Tsarà fetin'ny tany 2017
Ny fandraisana an-tanana ny New Waste Watchers dia hampihena ny fako ary hampitombo ny fanodinana ao amin'ny IMEX any Frankfurt
Polisy dia mampiantrano ny kaongresy UNWTO momba ny etika sy fizahan-tany